ယူကရိန်း Freelance Global Gigs - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
မင့်ခ်စ်ဆွေးနွေးပွဲ၏ရလဒ်မှာစစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုအပတ် Donbass ဒေသတွင်အခြေအနေဆိုးရွားသွားသည်။ Minsk Protocol သည် Donbass နှင့်ယူကရိန်းအကြားပွင့်လင်းသောထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Donetsk ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (DNR) သည်စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးရုရှားသည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုထောက်ခံလိမ့်မည်မှာရှင်းနေပါသည်။
ရုရှား - ၂၀၂၁ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဒီနှစ်ကျရင်ရုရှားဟာ State Duma ကိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိမ့်မယ် ယူကရိန်းရှိ Donbass ဒေသရှိအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်မည်။ ရုရှားအစိုးရပိုင် RT ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်၏အယ်ဒီတာချုပ်မာဂရီးရားစမွန်နွန်ကသူမအနေဖြင့်ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။Donbass ရုရှားကိုအိမ်ပြန်သင့်သည်။ "
ယူကရိန်း - သစ္စာဖောက်ခြင်း
ယူကရိန်းနိုင်ငံအစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင်နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုအားယူကရိန်းသမ္မတဟောင်းဗစ်တာယာနူကိုဗစ်ခ်ျအားစွဲချက်တင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 28ပြီလ ၂၁ ရက်တွင်ယူကရိန်းနှင့်ရုရှားကိုယ်စားလှယ်များသည် Kharkiv တွင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည် ရုရှားပင်လယ်နက်ရေယာဉ်စု၏နေထိုင်မှု.
ဇန်နဝါရီလ 15, 2021 ဇန်နဝါရီလ 15, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ယူအက်စ်အစိုးရသည်ယူကရိန်းနိုင်ငံရေးသမားများအားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်များအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံရေးသမားများကိုအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။ ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏သား Hunter နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုယိုစိမ့်စေသောရုရှားမှကြားခံပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Andrii Derkach တွင်ထိုစာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။
ဒီနှစ်ယူကရိန်းအတွက်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Coronavirus ကူးစက်ရောဂါနှင့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးသည်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးပြိုလဲသွားစေသည်။ ထို့အပြင်ရုရှားနှင့်အခြေအနေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ယူကရိန်းအနေဖြင့်အသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသောအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်နှင့်တွေ့ဆုံလိုခြင်းဖြစ်သည်
ရုရှားသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ယူရေးရှားကိုကြည့်ရှုသည်
ရုရှားနိုင်ငံသည်ယူရတ်ရှားနိုင်ငံများနှင့်မိတ်ဖက်ပြုမှုများကိုဆက်လက်အားဖြည့်ပေးနေသည်။ အဓိကအဖွဲ့အစည်းများမှာ Eurasian Economic Union နှင့် Shanghai Cooperation Organization တို့ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏“ Eurasian” လမ်းညွှန်သည်အဓိကအားဖြင့်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ရုရှားနိုင်ငံလုပ်ကိုင်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုမူဘောင်တွင်ထင်ရှားသည်။
ဘီလာရုစ် - ကေဂျီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်နိုင်ငံရေးကြားဖြတ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 29, 2020 နိုဝင်ဘာလ 29, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဘီလာရုစ်သမ္မတအလက်ဇန်းဒါးလူကာရှန်ကိုသည်မက်စ်မြို့ရှိဆေးရုံတစ်ရုံသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံသည် Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ် ၁,၆၆၁ ခုရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာဘီလာရုစ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောတစ်ရက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 26, 2020 နိုဝင်ဘာလ 26, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဒုတိယ ၀ န်ကြီးဟောင်း Pavlo Kuhta သည်ယူကရိန်းစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အဆိုအရယူကရိန်းဘတ်ဂျက်သည်ကုဒ်နီအနီရောင်ဇာတ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယူကရိန်းမြင်ဖူးသမျှအဆိုးဝါးဆုံးသောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာနသည်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ရုရှားနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလိုအပ်ဘဲရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရနိုင်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတအသစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများမဲပေးခဲ့ကြသည်။ အနိုင်ရသူမှာဒီမိုကရက်တစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးတွင်နှစ်ရှည်လများသမိုင်းရှိသည်။ နှစ်သစ်တွင်အမေရိကန်၏အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပြောင်းအလဲများစွာထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွက်၎င်းသည်ကြိုဆိုသည့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
နိုဝင်ဘာလ 7, 2020 နိုဝင်ဘာလ 7, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အီရန်ကိုတောင်းဆို ယူကရိန်းလေယာဉ်၏ကျဆင်းခြင်းသို့ ယူကရိန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် PS752 ပျက်ကျ။ အိုင်စီအေအိုင်စီကောင်စီသည်တီဟီရန်တွင်၎င်း၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြရန်နှစ်လသာရှိသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ တီဟီရန် - ကိယက်ဗ်ဆွေးနွေးပွဲများ၏ရလဒ်သည်မသိရှိရသေးပါ။
အောက်တိုဘာလ 31, 2020 အောက်တိုဘာလ 31, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဘီလာရုစ်တွင်ဆန္ဒပြမှုများသည်သြဂုတ်လတွင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်စတင်ခဲ့သည်။ နုိုင်ငံရေးရလဒ်အရအားနည်းချက်ရှိသည်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Svetlana Tichanovskaya သည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားထောင်ချခြင်းခံရပြီးတိုင်းပြည်မှထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ သူမထွက်ခွာသွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာသူမ၏ဘဝနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယူကရိန်း - Zelensky သည်ဒေသတွင်းရွေးကောက်ပွဲများတွင်ဆုတ်ယုတ်မှုကိုကြုံတွေ့နေရသည်
အောက်တိုဘာလ 28, 2020 အောက်တိုဘာလ 28, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ယူကရိန်းတွင်ကျင်းပသောရွေးကောက်ပွဲများသည်ပြည်သူ့အစေခံဖြစ်သောသမ္မတဗလိုဗီဒင်ဇယ်လင်စကီး၏နိုင်ငံရေးပါတီအားထောက်ခံအားပေးမှုကျဆင်းလာသည်။ အဆိုပါကင်ပိန်းချို့ယွင်းချက်ခဲ့သည်။ Zelensky သည်ယူကရိန်း Coronavirus ကာကွယ်ဆေးအားကြေငြာလိုက်ခြင်းသည်ပါတီအားအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
Eurasian Economic Union ရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲ။
အောက်တိုဘာလ 20, 2020 အောက်တိုဘာလ 20, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Eurasian Economic Union ကိုသမိုင်းဝင်ရှုထောင့်သုံးခုဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမူဘောင်အတွင်းတွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဒီပုံစံ (၃) ခုကဒီဂရီတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်နေပြီး EAEU ၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုပေးခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 19, 2020 အောက်တိုဘာလ 19, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အာဒိုဂန်ကသူသည်ခရိုင်းမီးယားကိုရုရှား၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ကရင်မလင်ကိုယ်စားလှယ်များကအာဒိုဂန်သည်ခရိုင်းမီးယားနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုပြီးနောက်ရုရှားနှင့်တူရကီပြည်ထောင်စုသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ အာဒိုဂန်မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ပြည်ထောင်စုဆိုတာဘာမှပြောလို့မရဘူး” ဟု Pushkov ကပြောကြားခဲ့သည်။
MH17 - ရုရှားနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုများတိုးပွားလာသည်
အောက်တိုဘာလ 17, 2020 အောက်တိုဘာလ 17, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
၂ ဝ ၁၄ ခုနှစ်တွင်မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းပျံသန်းမှု ၁၇ (MH17) ပျက်ကျမှုသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရန်ရုရှားဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိရုရှားသံအမတ်အလက်ဇန္ဒား Shulgin ကိုဒတ်ခ်ျနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒတ်ခ်ျပါလီမန်သို့ Stef Blok ။
စက်တင်ဘာလ 28, 2020 စက်တင်ဘာလ 28, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီကအမေရိကန်ဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များသည်ယူကရိန်းမိုးကောင်းကင်နှင့်မြို့တော်အနီးနှင့်ပင်လယ်နက်အနီးတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကိယက်ဗ်နှင့် Odessa ဒေသခံများကပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏တက်ကြွသောအဆင့်အတွင်း, သူတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌မြင်နေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များသည်ယူကရိန်းလေထုထဲသို့မတော်တဆဝင်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
စက်တင်ဘာလ 26, 2020 စက်တင်ဘာလ 26, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ယခုအပတ်တွင်ယူကရိန်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးအဲလက်စ်ဒန်နီလိုကရုရှားလူမှုရေးကွန်ရက်အားအဆုံးအဖြတ်ပေး vKontakte။ VK သည်စိန့်ပီတာစဘတ်တွင်အခြေစိုက်သောရုရှားအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်လူမှုကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ VK ကိုဘာသာစကားများစွာနဲ့ရရှိနိုင်ပေမယ့်အများစုကိုရုရှားပြောသူတွေကအသုံးပြုတယ်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 21, 2020 စက်တင်ဘာလ 20, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ယခုတနင်္ဂနွေတွင်ပိုလန်သည်လစ်သူယေးနီးယားနှင့်ပေါင်းစည်းရေးစီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည်မှာရှင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုလန် - လစ်သူရေးနီးယားဓနသဟာယသစ်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်နိုင်ငံလုံးသည်အီးယူမှထွက်ခွာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာပိုလန်နှင့်လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံသည်ဘီလာရုစ်အခြေအနေ၏ရှေ့တန်းမှ ဦး ဆောင်နေသည်။
ဘီလာရုစ် - Tikhanovskaya က“ Taraikovsky စာရင်း” ကိုကတိပေး
စက်တင်ဘာလ 18, 2020 စက်တင်ဘာလ 18, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဘီလာရုစ်သည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရသည်။ ထိခိုက်သေဆုံးမှုများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးမှုများရှိခဲ့သည် ဒီအပတ်, သမ္မတအလက်ဇန်းဒါးလူကာရှန်ကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးအတွင်းပူတင်က Lukashenko အား Lukashenko အားငွေကြေးအထောက်အပံ့နှင့်ထောက်ပံ့မှုများပေးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 15, 2020 စက်တင်ဘာလ 15, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေးအစိုးရသည်ဂျူးနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မတိုင်မီနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်သော့ပိတ်ဆို့မှုစတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Yom Kippur နှင့် Sukkot အားလပ်ရက်များအထိတိုးချဲ့ပြီးသုံးပတ်ကြာပိတ်သိမ်းမည် သော့ခတ်ခြင်းကိုမွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်စတင်မည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအောက်ရှိ Biden Leaker၊
စက်တင်ဘာလ 12, 2020 စက်တင်ဘာလ 12, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ယူအက်စ်ဘဏ္Treာရေးဌာနသည်ယူကရိန်းအမတ် Derkach နှင့်ရုရှားနိုင်ငံသားသုံးယောက်အားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုအမေရိကန်ဘဏ္Treာရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ဒါးကတ်၏ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အရေးယူမှုများချမှတ်ခဲ့သည်။ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုစာရင်းတွင်ရုရှားနိုင်ငံသားသုံး ဦး လည်းပါ ၀ င်သည်။
ဘီလာရုစ် - မာရီယာကိုလက်စ်နီနိုဗာ၏ဖမ်းဆီးမှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်
ပြည်ပရောက်ဘီလာရုစ်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Svetlana Tikhanovskaya သည်သူမ၏နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မာရီယာကိုလက်စ်နီနိုဗာအားမနေ့ကဘီလာရုစ်အာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးရမိရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် Tikhanovskaya သည်လစ်သူယေးနီးယားမှပြည်ပရောက်အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
သောကြာနေ့တွင်ယူကရိန်း Kherson တွင်ရုရှားဘာသာစကားဆရာတစ် ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်အောက်တိုဘာ ၉ ရက်အထိချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရသည်။ ယူကရိန်းတွင် Coronavirus အရေအတွက်တိုးများလာသဖြင့်၎င်းသည်မလုံခြုံပါ။ ယခုကူးစက်ရောဂါသည်ယူကရိန်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လျက်ရှိသည်။ စွပ်စွဲခံရသူ Tatyana Kuzmich၊ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်.
စစ်မှန်သော Navalny ကားအဘယ်သူနည်း
သြဂုတ်လ 28, 2020 သြဂုတ်လ 28, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Alexei Navalny သည်အနောက်တိုင်းခေါင်းဆောင်များ၏အာရုံစိုက်မှုကိုခံရသည်။ သူသည်ဆိုက်ဘေးရီးယား၌လက်ဖက်ရည်ဖြင့်အဆိပ်သင့်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူသည်ဂျာမနီရှိ Charite ဆေးခန်းတွင်ကုသမှုခံယူနေသည်။ အဓိပတိအန်ဂျလာမာကယ်ကရုရှားကအဆိပ်သင့်မှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 26, 2020 သြဂုတ်လ 26, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အလက်ဇန်းဒါး Lukashenko ကဘီလာရုစ်နိုင်ငံ၏ Maidan ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော်လည်းတူညီသောသန်စွမ်းမှုမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ယာယီသာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်တပ်များပိုမိုအားကောင်းလာပြီး၎င်းသည်သူ၏နောက်ဆုံးသက်တမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူသည်၎င်းကိုဖြတ်သန်းနိုင်လျှင်၎င်းသည်ရုရှား၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သြဂုတ်လ 24, 2020 သြဂုတ်လ 24, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ကနေဒါအစိုးရသည်အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံလေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှလေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် လေယာဉ် 752, ဒါပေမယ့်ဒီကန ဦး အစီရင်ခံစာသာပါရှိသည် "ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များ။ " ဖက်ဒရယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၀ န်ကြီးနှစ် ဦး ကအီရန်သည်မေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အီရန်လေကြောင်းအာဏာပိုင်။ ။ ပျံသန်းမှုခရီးသည် ၇၅၂ ဦး ပထမဒုံးပျံပြီးနောက်အသက်ရှင်ခဲ့
သြဂုတ်လ 23, 2020 သြဂုတ်လ 23, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
မြို့ပြလေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ဥက္ကhead္ဌနှင့်အီရန်နိုင်ငံ၏မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ကြီး Tooraj Zanganeh ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ - ပထမဆုံးဒုံးကျည်သည်လေယာဉ်ကိုထိမှန်ပြီးနောက်လေယာဉ်မှူးအတွင်းမှလေယာဉ်မှူးများ၏အသံများကခရီးသည်များဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် အသက်ရှင်သော ၂၅ စက္ကန့်အကြာတွင်ဒုတိယဒုံးကျည်သည်လေယာဉ်ကိုထိခဲ့သည်။
ပင်လယ်နက်မှတူရကီသဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်များခန့်မှန်းတန်ဖိုး $ 65 Billion
သြဂုတ်လ 22, 2020 သြဂုတ်လ 22, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
တူရကီကတွေ့ရှိခဲ့သောဓာတ်ငွေ့သိုက်ခန့်မှန်းထားသည် အကြောင်းကို $ 65 ဘီလီယံမှာပင်လယ်နက်။ ၎င်းကိုတူရကီစွမ်းအင်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ် ၀ န်ကြီး Fatih Dönmezကပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကထုတ်ပြန်ကြေငြာသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပမာဏသည်တိုင်းပြည်အတွက်အချိန်တိုအတွင်းလုံလောက်နိုင်သည်ဟုရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ခြောက်နှစ်အတွင်းမှာပဲတိုင်းပြည်ဟာကုဗမီတာ ၃၂၀ ဘီလီယံကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်။
သြဂုတ်လ 22, 2020 သြဂုတ်လ 22, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အီရန်လေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Touraj Dehghani Zanganeh ကအီရန်နိုင်ငံသည်မကြာမီဆွေးနွေးမှုများစတင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် တီဟီရန် ယူကရိန်းလေကြောင်းလိုင်း၏သားကောင်များများအတွက်လျော်ကြေးငွေအပေါ်။ ယူကရိန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းမှလေယာဉ် ၇၅၂ (PS752) Tehrand မှကိယက်ဗ်သို့ပျံသန်းသည်။ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင်ပစ်ချခံခဲ့ရပြီး ၁၇၄ ယောက်လုံးနှင့်သင်္ဘောသားများသေဆုံးခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 19, 2020 သြဂုတ်လ 19, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ယူကရိန်း Verkhovna Rada ၏လက်ထောက်ဖြစ်သူ Alexey Zhuravko သည်သူ၏ရာထူးကိုခံယူခဲ့သည် Facebook ကစာမျက်နှာ ယူကရိန်းအမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများသည်မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြမှုများကိုစည်းရုံးရေးတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောပိုလန်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်၍ ဘီလာရုစ်သို့အမြန်သွားခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် Zhuravko သည်စာနယ်ဇင်းသမားဖြစ်သည် နိုင်ငံရေး သတင်း။
ဘီလာရုစ် - လမ်းဆုံမှာရှိတဲ့လူလူကာရှန်ကို
သြဂုတ်လ 17, 2020 သြဂုတ်လ 17, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဘီလာရုစ်သည်သြဂုတ်လ ၉ ရက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်။ ယခုအချိန်တွင်သမ္မတအလက်ဇန်းဒါးလူကာရှန်ကိုသည်အာဏာကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်ပြင်ပမှပါဝင်လှုပ်ရှားသူအချို့ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမတူကွဲပြားသောသရုပ်ဆောင်သူများအတွက်အကြောင်းပြချက်မှာ Lukashenko တွင်နယ်ပယ်စုံကစားခြင်းကိုအခြေခံသည်။
Coronavirus - ယူကရိန်းသည်နေ့စဉ်စံချိန်သစ်သတ်မှတ်သည်
သြဂုတ်လ 13, 2020 သြဂုတ်လ 13, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း၊ ယူကေတွင် coronavirus ကူးစက်မှုအသစ် ၁၅၅၉ ခုတွေ့ရှိရသည်ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုလုံးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်စံချိန်တင် ရောဂါအများစုသည် Kharkiv နှင့် Lviv ဒေသများတွင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသောကြာနေ့တွင် coronavirus ကူးစက်ခံရသည်ဟုအတည်ပြုခံရသူ ၂၂ ဦး သေဆုံးပြီးလူနာ ၅၃၀ ကိုပြန်လည်သက်သာစေခဲ့သည်။
ရုရှားနှင့် Lublin တြိဂံ Lukashenko ကိုတုံ့ပြန်
သြဂုတ်လ 13, 2020 သြဂုတ်လ 13, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
လစ်ဗျား၊ ပိုလန်နှင့်ယူကရိန်းတို့သည် Lublin Triangle ဟုခေါ်သောပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသုံးမွှာပူးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးများ၏ထုတ်ပြန်ချက်များမှာ“ဘီလာရုစ်နိုင်ငံ၏အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းအပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုနိုင်ငံ၏သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်
Coronavirus - ယူကရိန်းတွင်ဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၁၀၀၈
သြဂုတ်လ 10, 2020 သြဂုတ်လ 10, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ယူကရိန်းတွင် coronavirus ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၁၀၀၈ ခု ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်လူနာ ၃၈၇ ဦး ကိုပြန်လည်ကုသပေးခဲ့ပြီး coronavirus ကူးစက်ခံထားရသူ ၂၅ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ရောဂါကူးစက်မှုအများစုမှာ Lviv (24), Ivano-Frankivsk (387), Kharkiv (25) နှင့် Chernivtsi (130) ဒေသများတွင်ဖြစ်သည်။ ကိစ်စအသစ် ၆၂ ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။